जनकपुरको वैदेही हस्पिटलको लापरबाहीले एक नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ । – BSN.COM.NP
जनकपुरको वैदेही हस्पिटलको लापरबाहीले एक नवजात शिशुको मृत्यु भएको छ ।
दुर्घटनाप्रदेश २ मधेश
By Province 1 One	 On Mar 30, 2021 0
अस्पतालकै लापरबाहीका कारण सुत्केरी व्याथाले च्यापेपछि सोमवार साँझ भर्ना हुन आएकी धनुषाको लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका–७ की शिला यादवको बच्चा नजन्मिदै पेटमै मरेको हो ।
पहिलो बच्चाको आमा बन्न लागेकी उनलाई सोमवार बेलुकी व्याथाले च्यापेपछि जनकपुरको बाह्रविघा छेउमै रहेको वैदेही हस्पिटलमा उनलाई भर्ना गरिएको थियो ।
साँझ करिब पौने सातबजे भर्ना हुनेबेला १० मिनेटमै डाक्टरलाई बोलाइदिने भनेर अस्पतालमा डयुटीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीले आश्वसान दिएका थिए ।
‘पहिले भर्ना गर्नुस केही हुँदैन् । हामी डाक्टरलाई फोन गर्दैछौँ । १० मिनेटमै आउनुहुन्छ भनेर आश्वासन दियो । तर बच्चा अन्तिम कण्डिसनमा पुगिसकेपछि राति डेढबजे मात्र डाक्टर आयो,’ शिलाकी श्रीमान रमण यादवले भने, ‘हामीले डाक्टरलाई बोलाइदिन पटक पटक हार गुहार गरिरहयौँ । तर पैसा लुट्ने चक्करमा अस्पतालले विरामीलाई अझै सिरियस बनाउन खोज्यो । मेरो बच्चा त्यसै मरेको होइन् अस्पतालले हत्या गरेको हो ।’
बच्चाको अवस्था बिग्रिएपछि शिलालाई अस्पताले करिब दुईबजे अप्रेशन थिएटरमा लगेको र तीन बजे बच्चाको मृत्यु भइसकेको भनी खबर गरेको रमणले बताए ।
समयमा डाक्टर नआएको कुरा अस्प्तालले समेत स्वीकार गरेको छ ।
डाक्टर नहुँदा समेत अस्पतालले विभिन्न बहानामा विरामीको आफन्तलाई अल्झाउँदै पर्खिन भनेका थिए । विरामी आएकै बेला डा. रोशन मिश्राले गाइनोक्लोजिस्ट डाक्टर सुनिता राय यादवलाई फोन गरेको र आउँदै छु भनेर जवाफ फर्काएपनि नआएको अस्पतालका संचाकल सदस्य समेत रहेका डा. सन्तोष साहले भने ।
मापदण्ड विपरित संचालित यस अस्प्तालमा बिना अल्ट्रा साउण्डकै विरामीको अप्रेशन गर्ने गरिएको छ । ५० बेडको स्वीकृती पाएको यस अस्पतालमा अल्ट्रासाउण्डको सुविधा नरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
सिरियस विरामीलाई अति आवश्यक परेको बेला बाहिरबाट अल्ट्रासाउण्ड गराए अप्रेशन गर्ने गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
होली बेन्च प्रेस प्रतिस्पर्धा २०७७ गराएर मोन्टी जिम क्लबले मनायो होली
शर्माको प्रतिभा हेलिवर्ड परिक्षणको तयारी पुरा
This Week: 7838
This Month: 38605